Hypertensive संकट: वर्गीकरण र पहिलो सहायता
को हृदय प्रणाली को विभिन्न रोगहरु आज दुनिया मा एक अग्रणी स्थिति कब्जा। Meteozavisimost, मोटोपना, नियमित तनाव - यी सबै कारक ढिलो होस् वा पछि उच्च रक्तचाप को उजुरी एक हृदय रोग विशेषज्ञ बारी गर्न धेरै मानिसहरू बल गर्नेछ। धम्की हृदय आक्रमण वा स्ट्रोक व्यवहार गर्न नचाहनु। यस्तो अवस्था खतरनाक छन् र अशक्तता वा मृत्यु नेतृत्व गर्न सक्छन्, त्यसैले, पहिलो अलार्म Bells महसुस, यो डाक्टर जान आवश्यक छ।
रोग बारे एक सानो
Hypertensive संकट त्यहाँ रक्तचाप मा एक तेज वृद्धि छ जो एक रोग अवस्था भनिन्छ।
यो कुनै पनि उमेर मा उत्पन्न गर्न सक्छन्, तर सबै भन्दा विरामीहरु 50 वर्ष कोसेढुङ्गो कदम गर्नेहरूलाई छ। मा 30 वा 20 वर्ष संकट बारम्बार अवस्थामा।
हृदय रोग कुनै एक प्रतिरक्षा छ, तर दबाब संकेतक मतभेद ग्रस्त गर्नेहरूलाई सबैभन्दा जोखिममा छन्।
संकट कुनै स्पष्ट कारण वा कुनै परिस्थितिमा फलस्वरूप उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
यस्तो विरामीहरु आवश्यक तयारी दिन उत्तेजना हटाउन अति महत्त्वपूर्ण समय हो, र गंभीर अवस्थामा एक एम्बुलेन्स कारण।
सरकारी चिकित्सा डाटा अनुसार, hypertensive संकट घरमा डाक्टर को आगमन लागि मुख्य कारण हो, र मान्छे को% कुनै थप 25 भन्दा व्यवस्थापन गर्न समसामयिक सहायता प्रदान गर्न।
विकृति विभिन्न तरिकामा उत्पन्न हुन सक्छ। hypertensive संकट को वर्गीकरण रोगी को कठोरता को डिग्री मा आधारित छ। यसलाई निम्न प्रकार मा विभाजित छ:
मूल (uncomplicated)। अपेक्षाकृत थोरै र रोगी एक गम्भीर जोखिम वहन गर्दैन। को छाती, वाकवाकी र उल्टी मा चक्कर आना, दुखाइ, दबाव प्रकुपित गर्न सक्नुहुन्छ। manifestations संग आफ्नै सामना गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, तेर्सो स्थिति लिन र उपस्थित चिकित्सक द्वारा सिफारिस तयारी पिउन।
दोस्रो। यो गम्भीर द्वारा विशेषता। चिकित्सा को अभाव मा अक्सर अन्य अङ्गहरू असर गर्छ। आपतकालीन चिकित्सा हेरविचार को दयनीय आवश्यकता मा एक रोगी जस्तै। सबै भन्दा साधारण हृदय आक्रमण वा स्ट्रोक यस्तो विरामीहरु मा ठीक हुन्छ। त्यसैले, यो स्वास्थ्य स्थिति र रक्तचाप परिवर्तन निगरानी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
स्वास्थ्य को गिरावट गर्न नेतृत्व कि कारक आधारमा, hypertensive संकट को आधुनिक वर्गीकरण यसलाई निम्न प्रकार मा विभाजन:
Neurovegetative। कुनै पनि हृदय रोग र रक्त नली सम्बन्धित छैन। यो गम्भीर तनाव प्रतिक्रिया रूपमा उत्पन्न हुन्छ। यो वाकवाकी, उल्टी, चक्कर आना र टाउको दुखाइ को रूप मा प्रकट गर्नुभयो। यो लगभग2घण्टा एक औसत रहन्छ। मा-रोगी उपचार आवश्यक छैन। यस्तै लक्षण सामना छन् जो धेरै मान्छे, एक स्ट्रोक वा हृदय आक्रमण भइरहेको डराएका थिए। डाक्टर अनुसार, जीवन जोखिम अन्य pathologies को अभाव मा पनि अनुपस्थित छ।
पानी र नुन। यसले आन्तरिक संतुलन regulates जो renin-angiotensin-aldosterone सिस्टम मा एक विफलता, को परिणाम हो। रोगी dyspeptic लक्षण, बिगडा मोटर समन्वय, गंभीर टाउको दुखाइ लागि भ्रामक हुन सक्छ। यस्तो स्थिति धेरै दिनको लागि पछिल्लो गर्न सक्नुहुन्छ।
Encephalopathy। यो स्ट्रोक र हृदय आक्रमण सबैभन्दा ठूलो जोखिम poses। यस्तो विरामीहरु अन्यथा, तीव्र cerebrovascular दुर्घटना संग epileptic दौरा शामिल यसको ऊतक को हार पछि हुन सक्छ, जरुरी चिकित्सा उपचार प्राप्त गर्नु पर्छ। अक्सर, आकस्मिक कक्ष डाक्टर समयमा आइपुग्दा र बिरामीको मृत्यु ठेगाना लगान समय छैन।
के गरिब स्वास्थ्य योगदान
यो अक्सर आक्रमण, उच्च रक्तचाप पछि, एक व्यक्ति यो सुनेपछि भनेर बुझ्न सक्दैन हुन्छ। सबै भन्दा साधारण कारण समावेश:
गंभीर भावनात्मक कष्टहरू;
वायुमण्डलीय दबाव, हावा, वर्षा, आदि मा विशेष उतार चढाव मा मौसम मा आकस्मिक परिवर्तन, .;
केही खाना उत्पादन, विशेष गरी नुन को प्रयोग;
केही लागूपदार्थ वा रद्द लिइरहेको;
रक्सी दुरुपयोग, धूम्रपान।
तथ्याङ्क अनुसार, दबाब को सबै भन्दा अत्यधिक चिन्ता र त्रास आक्रमणबाट उठाएको छ, त्यसैले यी विरामीहरु अन्यथा यो स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ, आफैलाई सँगै पुल गर्न आवश्यक छ।
hypertensive संकट को वर्गीकरण आधारित क्लिनिक एकदम भिन्न हुन सक्छन्। प्रत्येक व्यक्ति फरक छ र फरक तरिकामा दबाब मा वृद्धि ल्याउँछ। लागि एक मार्कर 180 अन्य 130 एक वास्तविक खतरा प्रतिनिधित्व गर्दैन यो महत्वपूर्ण छ।
पैदा हुनेवाला संकट को सबै भन्दा साधारण संकेत समावेश:
स्वास्थ्य ठिक गिरावट;
हथियार र खुट्टा मा कमजोरी;
gait को unsteadiness;
शरीर भर tremors;
टाउको दुखाइ र heartache;
को छाती मा जकडन को एक भावना;
उपस्थिति कालो आँखा अघि "मक्खी";
गंभीर वाकवाकी र उल्टी, राहत ल्याउन छैन।
रोगी आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ छैन भने, हुन सक्छ कि जटिलताहरुलाई एक धेरै जोखिम छ:
पूर्ण वा आंशिक पक्षाघात;
हृदयघात myocardial infarction कारण।
प्रकटीकरण र खुलारूपमा को डिग्री hypertensive संकट को वर्गीकरण मा निर्भर गर्दछ।
जब भयावह लक्षण व्यक्ति राख्नु र दबाब मापन गर्नुपर्छ। खराब प्रदर्शन भने, तपाईं कम कि रक्तचाप र hypertensive संकट (sedatives, painkillers, आदि ..) को वर्गीकरण आधारमा थप धन, लागूपदार्थ दिन आवश्यक छ।
antihypertensive ट्याब्लेटको विपरीत, इंजेक्शन धेरै छिटो हो, त्यसैले उनीहरूसँग बेहतर बनाउन सम्भव छ।
स्वास्थ्य स्थिति 10-30 मिनेट सुधार गर्नुपर्छ। यदि यो2घण्टा भित्र आउँदैन, घर मा एक डाक्टर कल गर्न चाहनुहुन्छ सुनिश्चित।
रोगी गर्न एम्बुलेन्स अघि:
फिर्ता अलिकति उनको टाउको फिर्ता फेंकता;
टाउको सुन्दर संकुचन (मा occiput क्षेत्र) लागू हुन्छ;
छाती क्षेत्र राहत।
पी यस समयमा सिफारिस गरिएको छैन। तरल पदार्थ वितरण दबाव मा वृद्धि गराउँछ जो Gag सहज क्रिया, ट्रिगर हुन सक्छ।
एक डाक्टर र सही निदान र परामर्श बिना दबाइ को आत्म-प्रशासन खतरनाक हुन सक्छ।
कसरी सही दबाब मापन गर्न
hypertensive संकट को वर्गीकरण कुनै पनि प्रकारको पहिचान गर्न हात Tonometer मा छ पर्याप्त छ - सिस्टोलिक र diastolic रक्तचाप नाप्ने लागि उपकरण।
उहाँले प्रत्येक व्यक्ति यो समस्या भोगिरहेका लागि चिकित्सा मन्त्री हुनुपर्छ।
आज यी उपकरणहरू को एक विशाल श्रेणी छ बजार मा, तिनीहरूले हुन सक्छ:
तिनीहरू सबै मा मुख्य दबाव मापन कार्य राम्रोसँग प्राप्त र भिन्न:
थप सुविधाहरू संख्या;
सबैलाई आफु को लागि सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प चयन गर्न सक्षम हुनेछ।
मापन प्रक्रिया केही सुविधाहरू सम्झनुपर्छ मा एक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त गर्न;
बाँकी अर्को 10-15 मिनेट अघि;
दायाँ-हस्तान्तरण आफ्नो बायाँ हात मा कफ राखे, त्यसको विपरीत बायाँ-handers;
हावा प्रवाह हुनेछ जसमा एक जलाशय हृदय स्तरमा हुनुपर्छ र पनि कुहिनो मोड्नु गर्न काँध नजिक-फिटिङ छैन।
140 माथिबाट कि आंकडा को परिणाम मूल्यांकन र कहिले तल 90 नाघेको छ, हुनत व्यक्तिगत यसलाई छलफल गरिनुपर्छ।
मा-रोगी उपचार गंभीर वर्गीकरण hypertensive संकटहरूको आवश्यक पर्दछ। आपतकालीन हेरविचार अक्सर बिरामीको जीवन बचाउन सक्छ। मा यो रसिद अर्को अध्ययन आवश्यक गरिनेछ:
हृदय Holter अनुगमन;
को मूत्र प्रणालीको अल्ट्रासाउंड;
सामान्य र जीव रसायन रगत परीक्षण।
चिकित्सा सर्वेक्षण को परिणाम आधारित व्यक्तिगत चुनिएको छ।
लागूपदार्थ सल्लाह दिन्छन्
प्रभावकारी औषधिको खुराक योजनाहरु चयन cardiologists संलग्न।
सबैभन्दा औषधि पनि कसले वर्गीकरण अनुसार hypertensive संकट रोक्न भनेर को एक समूह नियुक्त समावेश:
क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स।
धेरै विरामीहरु एक मृगौला विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, Pulmonologist, नसा विशेषज्ञ द्वारा एक समानान्तर उपचार आवश्यक हुन सक्छ। उनि एक अतिरिक्त विधि नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ:
"Diazepam" र अरूलाई।
सजिलो क्लिनिक र hypertensive संकटहरूको को वर्गीकरण आपतकालीन उपचार आवश्यक छैन। पहिले डाक्टर द्वारा निर्धारित को चिकित्सा पिउन पर्याप्त।
मुख्य खतरा गम्भीर जटिलताहरू को विकास मा उच्च दबाव छ। मुख्य बोझ मा पतन:
मस्तिष्क र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली;
उच्च रक्तचाप को बलियो आक्रमण प्रकुपित गर्न सक्षम छ:
तीव्र वा पुरानो हृदय र पल्मोनरी अपर्याप्तता ;
edema र पल्मोनरी thromboembolism।
यी रोगहरु को सबै त जब दबाव को वृद्धि को पहिलो संकेत कारबाही गर्न आवश्यक छ, जीवनको लागि अत्यन्तै खतरनाक हो।
दोस्रो प्रकार को वर्गीकरण अन्तर्गत पतन जो hypertensive संकट, को जटिलताहरू अनुभव गरेका विरामीहरु, तपाईंको स्वास्थ्य राम्ररी अनुगमन र सरल नियमहरू पालन गर्नुपर्छ:
रक्तचाप स्तर को दैनिक मापन;
छुट्टै नोटबुक सङ्केत गर्छ प्राप्त लिपिबद्ध;
पूल सामेल गर्न, व्यायाम गर्न हरेक बिहान;
रक्सी पिउन छैन;
हरेक6महिनामा एक हृदय रोग विशेषज्ञ, आवश्यक अन्य विशेषज्ञहरु भने भ्रमण गर्न।
अवस्था एक मानिस लागि असामान्य छ भने, तपाईं अझै पनि जांच गर्नुपर्छ। pathologies को अभाव बलियो भावनात्मक भार र तनाव बचा गर्न।
पोषण रिकभरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आहार को मुख्य ध्यान खपत खाना को गरमी सामाग्री कम छ।
बहिष्कार गर्न निश्चित हुनुहोस्:
यसलाई थप खान सिफारिस गरिएको छ:
उनि हृदय प्रणाली, मस्तिष्क र अन्तस्करणले मा एक लाभदायक प्रभाव हुनेछ जो रक्तचाप मा वृद्धि मा organami- "लक्ष्य" हो, म्याग्नेसियम र पोटासियम सबै धनी छन्।
Hypertensive संकटहरूको, वर्गीकरण, जटिलताहरू र आपतकालीन हेरविचार - रोगी र आफ्नो नातेदार दुवै उपयोगी हुने महत्त्वपूर्ण जानकारी। तिनीहरूले जीवन एउटा वास्तविक खतरा प्रतिनिधित्व, एक खतरनाक अवस्था उत्पन्न। यस्तो विरामीहरु सधैं आफ्नो घर चिकित्सा मन्त्री tonometer र रक्तचाप कम गर्ने दबाइहरु मा हुनुपर्छ।
सबैभन्दा जोखिममा ती आफ्नो समस्या बारे थाहा नगर्ने ती छन्। अचानक आक्रमण को घटना मा, तिनीहरूले आवश्यक लागूऔषधको कमी गर्छन, र आफ्नो भाग्य एक एम्बुलेन्स को समसामयिक आगमन मा निर्भर गर्दछ।
Akhil - यो के हो? रोग र यसको सुविधाहरू कारणहरू
कसरी चेचक? कसरी वयस्क र बच्चाहरु मा चेचक?
संगमरमर हड्डी रोग: कारण, लक्षण, उपचार, रोकथाम
Urolithiasis - भयानक यदि अन्तस्करणले मा microliths?
Laureth सोडियम सल्फेट - - यो सामान के हो र यसको प्रभाव के हो?
GOST अनुसार "कीव केक" को लागि नुस्खा। GOST को अनुसार "कीव केक" कसरी बनाउने?
मास्को र मस्को क्षेत्र मा राज्य पशु क्लिनिक
घरमा खरायो को के नस्ल हुर्किसकेका गर्न सकिन्छ
Myalgia: लक्षण, किसिम, उपचार
मलाई आश्चर्य: कसरी भनिन्छ औंलाहरु?
सुन्दर तालिका सेटिङ - एक महान खाने गर्न प्रमुख
सर्वश्रेष्ठ खेल ल्यापटप। गेमिङ दर्जा ल्याप्टप
व्यवसाय "रेल चालक": वर्णन, को विशेष, लाभ
Dalma - कसरी यो घरमा तयार?
मतदान गर्ने अधिकार र रूसी संघ को निर्वाचन प्रणाली